संविधान बनेपनि जादुमयी नेतृत्वको आश छैन
मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले त्यहाँको विकासमा गरेको ‘जादू’लाई लिएर उनको नेपाल भ्रमणका बेला निकै चर्चा भएको छ । कुनै बेला नेपाल जस्तै गरीब मलेसिया उनको सफल नेतृत्वले आज निकै अगाडि बढेको छ । मलेसियाको विकासबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्ने महाथिर आफैले पनि काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बताए । वास्तवमा नेपालले मलेसियाका सिको गर्न सक्छ ? यसै विषयमा अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग गरेको कुराकानी :
आइतबारसम्म सहमति नभए प्रक्रिया अगाडि बढ्छः खड्का
प्रमुख तिन दलले आइतबारसम्म असन्तुष्ट दलहरुसंग निर्णायक वार्ता गरिसक्ने निर्णय गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहित मधेसी दलहरुले वार्ताका लागि जारी प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने अडान लिएपछि संविधानसभाको जारी प्रक्रिया आइतबार सम्मका लागि रोकिएको हो । यसै सन्र्धभमा नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासंग पिपलनेटाले गरेको कुराकानी
अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग गरेको कुराकानी :
संविधान बनेपनि जादुमयी नेतृत्वको आश छैन अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग गरेको कुराकानी : मलेसियामा जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसलाई हामीले मुल्याङ्कन गर्ने हो भने महाथिर मोहमदले भनेको कुरा दमदार छ । मलेसिया र नेपालको स्थितिमा केही समानता छ । मलेसिया पनि नेपाल जस्तै एक बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । तर मलेसियाले त्यो दुवै स्थितिमा एकतामा बाँध्ने काम र विकासको काम सँगसँगै लगेको देखिन्छ ।